Iqembu labancane lase-Ukraine phezulu | Scrolla Izindaba
Iqembu labancane lase-Ukraine phezulu
Iqembu lase-Ukraine i-Shakhtar Donetsk lishaye ompetha base-Spain i-Real Madrid ngamagoli amathathu kwamabili NgoLwesithathu emdlalweni wesikwati sabo sentsha.
Bonke ngaphandle koyedwa wabo weqembu labadala akakwazanga ukudlala ngoba uye wahlola watholaka ene-Covid-19.
Umdlalo obukade umhla zingama-21 kuMfumfu, obuyinxenye ye-Champions League, ushaqise abalandeli emhlabeni wonke jikelele.
Ikakhulukazi ngenkathi leliqembu labancane lase-Ukraine lishaya amagoli amathathu eqandeni ngesiwombe sokuqala ekundleni yezemidlalo yasekhaya ye-Real.
I-Real ibuyile esiwombeni sesibili kodwa isikhathi bese sidliwe yinja.
I-Shakhtar iye yakhula njengeqembu eminyakeni esanda kwedlula kubongwa ukusekela kwendoda ecebe kakhulu yase-Ukraine, uRinat Akhmetov.
Uthengele leli qembu abadlali abambalwa base-Brazil kubalwa uTete ohlakaniphile oshaye igoli lokuqala kanti uye wabangumdlali oqavile ngalobo busuku.